Izindaba - Ungacubungula kanjani upende nge-shear emulsifier ephezulu [qiangzhong Machinery]
Imishini ye-Qiangzhong] I-emulsifier ephezulu yokugunda isebenzisa inhlanganisela eyenzelwe ngokukhethekile i-rotor ne-stator. Ngaphansi kokushayela ngesivinini esikhulu semoto, izinto ezizocutshungulwa zimunzwa ku-rotor futhi zibhekiswe emakhulwini ezinkulungwane zezenzo zokugunda ngesikhathi esifushane. Ngesikhathi senqubo yokugunda, okokusebenza kuhlukaniswa, kusatshalaliswe futhi kuhlakazeke ngaphansi kokushayisana kwe-centrifugal kanye nomthelela wejubane elikhulu kugebe eliqondile phakathi kwe-Rotor ne-stator. Ngasikhathi sinye, ngenxa yamandla aqinile we-kinetic womshini wokuvama kakhulu, izinto zezakhiwo ezahlukahlukene zakha ishear eqinile yokubacindezela. Isendlalelo samanzi sihlikihla izinyembezi futhi sishayisane, ukuze impahla isakazeke ngokuphelele, ifakwe emulsified, i-homogenized futhi ichithwe. Ngemuva kokuthi okokusebenza kuphuma emhlanganweni ojikelezayo we-stator ngejubane elikhulu, i-emulsifier ifakwe ithuluzi lokuqondisa kabusha ukuqhubekisela phambili umphumela wokusabalalisa kwe-emulsification.
Inqubo yokukhiqiza upende ibhekisa kunqubo yokudlulisa noma yokuguqula izinto zokusetshenziswa kanye nemikhiqizo eqeda ukwenziwa ibe ngopende abaqediwe, okuvame ukuba izinqubo zokusebenza kwamakhemikhali njengokuxuba, ukuhambisa, ukusabalalisa nokuhlunga. Imvamisa, ngokuya ngohlobo lomkhiqizo nezici zawo zokucubungula, qala ukhethe imishini yokugaya nokusabalalisa efanelekile yomshini, bese unquma imodi yenqubo eyisisekelo.
Ukukhiqizwa kokumboza ikakhulukazi inqubo yokusabalalisa kwe-pigment. Ukuze ungeze i-pigment ezintweni eziyisisekelo ukwenza upende wombala, kuyadingeka ukusabalalisa izinhlayiya ezihlanganisiwe zombala, ukuze izinhlayiya zombala zihlukaniswe zodwa ukuze zisatshalaliswe ngokulinganayo ekuhlanganiseni ukuze zenze ukumiswa kwe-colloidal . umzimba. Ukuhlakazeka kwezingulube endaweni enamanzi akuthinti kuphela umbala nobuhle be-coating, kepha kuthinta nezakhiwo zomzimba zokunamathisela njengokunamathela, ukuqina nokuqina kwesitoreji. Kodwa-ke, ngenxa yokuheha okukhulu kwamangqamuzana, ama-pigment aggregates aqinile futhi anzima ukusabalalisa. Ukusabalalisa kwe-pigment kuvame ukwenziwa kusetshenziswa i-emulsifier ephezulu ye-shear. Ku-shear emulsifier ephezulu, ukuhlanganiswa kwe-pigment kufakwa kumandla okugunda, amandla okugaya, njll, ukuze izinhlayiya ze-pigment zihlakazeke ngokufanayo endaweni yamanzi.
Isikhathi Iposi: Apr-01-2019